လိုနေ ခဲ့တာကြာပြီ – Hlataw.com
အ သက်(၄၀)၊အသားညှိညှိ၊အရပ်၅ပေ၈လက်မရှိပြီး ၊ တက္ကစီမောင်းသော ကိုနိုင်ဝင်း၏ ရန်ကုန်မြို့ပြင်းပြသော အပူချိန်အောက်ဝယ် တွေ့ကြုံဆုံခဲ့ရသော ဇာတ်လမ်းအထွေထွေဖြစ်သည်။ “တက်ကစီ…” “ညီလေး ဘယ်သွားမလို့လဲ…..” ” ကန်တော်ကြီးအကို……” “၃၅၀၀တော့ပေး…..ရလား….” “၃၀၀၀တော့ထားလိုက်အကို….” “တက်ကွာ ရတယ်….” ကိုနိုင်ဝင်းသည် တွံတေးဇာတိဖြစ်ပြီးလူပျိုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ကာ ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်မြောင်းရှိအမတစ်ယောက်အိမ်မှာနေ၍ အလုပ်လာလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရောက်ရောက်ချင်း ရေသန့်စက်ရုံတွင်ရေသန့်ပို့ကာ ကားအုံနာပေးမယ့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရှိ၍ တက္ကစီပြောင်းဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။ နေ့ခင်းနေ့လည်ကားနားနေခိုက် ဂိတ်မှာ သူငယ်ချင်းများနှင့်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး…. “နေကလည်းပူလိုက်တာဗျာ….” “ဟုတ်ပ……” “ညပိုင်းဆွဲရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဗျာ…” “ညပိုင်းကပိုက်ဆံတော့ပိုရပေမယ့် စိတ်မချရဘူးဗျ..”
.. အွတ် အွတ် အအအ ဖတ် ဖတ် အွတ် အွတ် အွတ် အွတ် ” ခဏ ခင်မလှဲလိုက် အကို့အပေါ်က လိုးမယ်” မခင်မကိုဖက်ကာ အောက်ကနေ လီးကိုကော့လိုးပါတော့တယ်.. အွတ် အွတ် အအအ ဖတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ် ဘွတ်….. အဖုတ်ကြီးကိုအောက်ကထိုးခွဲတော့ မခင်မမှာ ရှုံ့မဲ့ကာ … အသားကုန်ကောင်းနေပါပြီလေ…. ထို့နောက်ကစ်ဆင်ဆွဲကာ အမောဖြေပြီး… “ခင်မ ကုန်းပေး…” ဖင်ကြီးကို လက်နဲ့ကိုင်ကာ လီးကို တရပ်စပ်ထိုးလိုးပြီး မညှာမတာပြင်းပြင်း စောင့်လိုးတယ်… ဖုံး….ဖုံး…. ဘွတ် အွတ် ဘတ် ဘတ်…. အသားကုန်ဆောင့်ကာ မခင်မမှာ အိပ်ရာကိုအတင်းဆုပ်ကိုင်ကာ… “ကာင်းတယ် အွတ် အွတ် …လိုး လိုး…. လိုးစမ်း ကြမ်းကြမ်း” ကိုနိုင်ဝင်းမှာ အံကြိတ်ဖီးခံရင်း အချက် ၄၀ကျော် ဆောင့်ပြီး လရေများပန်းထုတ် ကာ နှစ်ယောက်အတူတူ ထပ်လျက် အမောဖြေ၍ စကားမပြောဘဲမှိန်းနေကြတယ်။ တစ်နာရီခန့်မှိန်းအနားယူ၍ အတူတူ ရေချိုးကာ…ပြန်ထွက်လာခဲ့ပြီး မခင်မကိုလိုက်ပို့ကာ ကားအပ်ဖို့အုံနာအိမ်သို့ ထွက်လာပါတော့တယ်…. ပြီးပါပြီ..